Baro AutoCAD oo leh fiidiyowyo - Geofumadas
Luulyo, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS
Waxaa jira ugu yaraan laba siyaabood oo lagu barto AutoCAD;
Marka hore waxay qaadataa koorso rasmi ah, qiimaha magaaladaada iyo tirada maalmaha ay ku qaadan karto
kan labaad wuxuu yahay in uu arko farsamoyaqaan shaqadii aan u baahannahay inaan ku sawirno, iyada oo fursada ah in la joojiyo, ku celi oo isku dayo.
Tani waa a Koorsada AutoCAD Iyada oo ku saleysan barashada is-barista isbarbar-dhigista fiidiyowga, soo koobitaanku wuxuu leeyahay saddex faa'iido:
1. Tallaabo tallaabooyin fiidiyow ah
Marka ardaygu rabo inuu AutoCAD ku bilaabo iyaga naftooda waxay ku qanacsan yihiin in dhibaatada ugu wayn aysan laheyn fikrad ah meesha laga bilaabayo. Sidaa darteed, koorsada, adoo muujinaya qorshaha madaama ay noqon doonto dhamaadka iyo tallaabo tallaabo tallaabo ah, dhiseyso waxay siinaysaa ardayga aragti guud oo ah waxa farsamooyinka shaqada AutoCAD waa.
Fiidiyowyadu waa hab sahlan oo lagu barto AutoCAD, taniyo, waxaad joojin kartaa wakhti kasta, ku celceli kartaa ama horay u marin kartaa gacanta haddii ay jirto xaalad cakiran.
2. Amarrada ugu badan ee loo isticmaalo 25 ee AutoCAD
Marka arday ka qaadataa buug ka AutoCAD waxaa laga yaabaa inaad kharashka $ 45, wuxuu ka Quusta ah ee aan awoodin in ay dalban oo kaliya si ay u sharxaan bogagga 11 interface yihiin oo gooni loo sooco oo ku filan si ay u buuxiyaan samir.
Inkasta oo AutoCAD ay leedahay tiro badan oo amarro ah, koorasku wuxuu diiradda saarayaa 25 taas oo hawsha ugu badan ee lagu sameeynayo qorshooyinka dhismaha ee 2D. Amarradan waxaa ku jira mabda'a la mid ah isticmaalka 2.4 version 1986 AutoCAD, sida marba marka uu is beddelay laakiin amarrada interface user ay sii bixiso tasiilaadka la mid ah sida ay tahay u wareegtaan iyo square dhigay miiska qabyo ah.
Amarradan 25 waxaa ka mid ah: 11 si ay u abuuraan shay, 13 si ay u saxaan iyaga iyo hal tixraac. Waxaa intaa dheer, hawlo dheeraad ah sida daabacaadda iyo cabbiraadda ayaa lagu muujiyay. Ugu danbeyn, ardaygu wuxuu bartay inuu isticmaalo amarrada interface iyada oo aan laheyn hal cutub oo loo qoondeeyay.
3. Mashruuca dhismaha dhabta ah.
Inkasta oo koorasyadu muujinayaan shaqooyinka ay leeyihiin amarrada 25, waxay ku jirtaa horumarinta mashruuca halka waxqabadka la og yahay.
Mashruucani wuxuu qabtaa taxanahan:
Diyaarinta sawir cusub
Qulqulka iyo qurxinta
Sida loo iibsado buugga
Buuggan wuxuu horay u heli jiray Lulu.com, halkaasoo ay ku bixisay kaarka deynta, oo ay ku jiraan Paypal iyo Lulu mas'uul ka ahaa inay u diraan albaabka gurigaaga.
Hadda waxaa laga helayaa fiidiyowyada Youtube, oo aad ka arki karto maqaalkani Koorsada AutoCAD haddii aan la bilaabin.
Post Previous«Previous Ku daabac adeegyada OGC ee GvSIG
Post Next Shirarka Aduunka ee QorshayaashaNext »
28 Jawaab in "Baro AutoCAD la videos"
Koorasku mar dambe diyaar uma aha iibinta Lulu.com
Laakiin waxaad ka arki kartaa YouTube YouTube maqaalkan.
tababarka xiisaha leh, oo lagama maarmaan u ah dhammaan ardaydaas dhismaha.
Si aad u iibsato waa inaad gujisaa bogga Lulu.com
oscar suasnabar aguilar isagu wuxuu leeyahay:
Aad u xiiso badan oo muhiim ah waa barashada autocad.
laakiin halkaan waa inaan bixiyaa lacagta 15.15.
hernan jeck isagu wuxuu leeyahay:
Waxaad hubisaa autocad si aad u hesho barnaamijka "ent5ero" iyo waxbarashada degdegga ah.
irene isagu wuxuu leeyahay:
hello magaaladaydu waa joogitaan jinniyo ah oo miy vonito iyo sida xafladaha bisha Juun ee noqota waalid aad u badan waxaan kugu casuumay inaad ogaato bulshada Estancia De Animas
IGLANDY isagu wuxuu leeyahay:
Qof walba waa ku faraxsanahay ..
Waxaan qof walba ku martiqaadayaa inay bartaan sida loo wado autocad waa muhiim weyn,
Waxaan jeclaan lahaa qof inuu ii sameeyo raalli ahaanshaha i siinta cinwaan internet ah halkaas oo aan heli karo hage wax ku ool ah si aan u barto sida loo isticmaalo arcgis, ee Isbanishka.
mahadnaq u ah dareenka iyo iskaashiga.
Guul iyo guulo ...
Perseus isagu wuxuu leeyahay:
sida in videos noqon doonaa ganaax iyo wax kasta laakiin waxaan xitaa ma soo bixi kartaa barnaamij lacag la'aan ah si ay markaas ku dhaqmaan waxa ay keeni videos kuwan, oo lagu daray, Anigu garan maayo haddii ay yihiin videos on CD ama VHS, jummmm, waxaan u baahan tahay inaad kala soo baxdo autocad barnaamij lacag la'aan ah u leedahay waxaa lagu rakibay mishiinka si ay u bilaabaan barbarta markaan imaado ka videos, web ama server in hoos free tan iyo waxa ka soo bixi waa daahir wevadas khasaare, qaar ka mid ah qashinka iyo wax jejejejeje kale
orlando jimicsi arzuaga isagu wuxuu leeyahay:
Waa maxay barnaamijka aan u baahanahay inaan barto
Eco-Honduras isagu wuxuu leeyahay:
Exelente egeomates oo runtii mararka qaarkood aad u dadka u sharax GIS ah oo si buuxda u fahamsan aad leedahay si aad u sigaar cagaaran par-ticularly marka aad u gelin ... waan hehehhehe sameeyo.
Jose Vidal isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan macluumaadka ku qaato maqal ama fiidiyow laakiin ma garanayo sida ugu macquulsan
runta ayaa ah waa maxay barnaamijka ay kugula talinayaan haddii aad iiga sheegi karto garaacis cinwaanka
Markaad gashid xiriirka, waa inaad kudhaaftaa kaarka deynta. Waana ansax waddan kasta
LUIS ALBERTO ROJAS CANALES isagu wuxuu leeyahay:
HALKEE AYAAD KU HELI KARAA 15.50
Waxaan rabaa in aan ogaano haddii ay bixiyaan kuwa bixiya inay ka qaataan PERU ALSO VALID FOR PERU
Waxaan jeclaan lahaa inaan barto autocad, laakiin ma aqaan sida qiimaha ay yihiin,
Waxaan jeclaan lahaa inaan akhriyo aragti soo bandhigid
beatriz adriana isagu wuxuu leeyahay:
waa wax aad u fiican in la ogaado cadawga cad ee caanka ah oo kaliya ku shaqeynaya waxaadna arki doontaa in chido yahay
Waa inaad ku iibsataa internetka, adiga oo isticmaalaya kaarka deynta.
waxaa jira muuqaal ah in uu sameeyo.
Antonio A. isagu wuxuu leeyahay:
Magaalada ku yaala Colombia iyo bakhaar ku yaala maktabadda?
joornaalada isagu wuxuu leeyahay:
fiican, laakiin ka jawaab su'aalaha aan ka tagno
Cd ayaa laga heli karaa Lulu, qiimihiisu $ 15.50, oo lagu daray maraakiibta; Waxaad ka iibsan kartaa kaarka deynta oo waxay kuugu imaan doontaa cinwaankaaga
RONNY JIMENEZ isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaad i siiso dhammaan macluumaadka si ay u awoodaan inay codsadaan koorsada autocad ee fiidiyowyada oo ay ku jiraan mahad celinta
javier ordoñez isagu wuxuu leeyahay:
hi waxaan siinayaa fasalada autocad ugu yaraan asaasiga ah haddii qof uu xiiseynayo tani waa warqaddayda Gudoomiye sare 3000@hotmail.com My celu waa 0424-1738526 sidoo kale waa mid aad u dhaqaale badan oo ku saabsan buugga iyo saacadaha aniga la ii tirinaayo waadna ku guuleysan doontaa waad ku mahadsan tahay koorsooyinka ay bixiyeen naqshadaha internetka.
Cyril isagu wuxuu leeyahay:
Bisha hambalyo ee kobcinta buundooyinka si ay u caawiso arday badan
Cd ayaa laga heli karaa Lulu, qiimo ahaan $ 15.50 oo aadan soo dejisan karin, kaliya u dir boostada
gaston isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan barto laakiin ma aqaano barnaamijka aan soo dejinayo haddii ay i caawini karaan, waxay noqon laheyd wax iiga faa'iido leh, mahadsanid aad u badan !!
Diana isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan barto laakiin ma aqaano waxa aan runtii u baahanahay in aan ka soo dejiyo barnaamijyadan
CARLOS ANDRES VILLEGAS isagu wuxuu leeyahay:
BARNAAMIJ OO AAD U BAAHAN YAHAY